सन्ते र पुन्टे
घनबहादुर थापा आइतवार, भदौ ४, २०७४ 2444 पटक पढिएको
सन्ते माझी कक्षा ४ मा पढ्छ । एक दिन स्कुलबाट फर्कंदा छिमेकी काकाले उनकै छोरा पुन्टेलाई कुटेको देख्यो । ठूलोठूलो स्वरमा गाली गरेको पनि सुन्यो । पुन्टे सन्तेको साथी हो । साथी कुटिएको देखेर उसलाई साह्रै दुःख लाग्यो । ज्यादै नरमाइलो पनि भयो । साथीको मायाले ऊ रुनमात्रै सकेन ।
‘किन कुटेका होलान् पुन्टेलाई !’ उसले मनमनै भन्यो, ‘घरमा गएर बाबालाई लिएर आउँछु’ ऊ सरासर घरतिर लाग्यो । बाबा घरबाहिर जानुभएको रैछ । पुन्टेलाई बचाउने प्रयास असफल भयो । स्कुल पोसाक फेर्‍यो । हातमुख धोयो । खाजा खान मन लागेन । गृहकार्य गर्न पनि सकेन । उसको वरिपरि पुन्टे रोएको आवाज गुञ्जिरह्यो । केही सोचेर ऊ फुत्त बाहिर निस्कियो ।
काकाको घर अगाडि पुगेर सन्ते उभियो । केही पर त्रिशूली नदी सुसाइरहेको थियो । काका ठूलो स्वरमा पुन्टेलाई गाली गर्दै थिए । काकाले भने, ‘भन् आज माछा बेचेको पैसा कता लगिस् ? ’
पुन्टेले माछा बेचेको पैसा बाबालाई दिएनछ । पुन्टे कुटिनुको कारण सन्तेले थाहा पाइहाल्यो । रिसाएका काकाको डरले घरभित्र पस्ने आँट उसले गरेन ।
पुन्टे अझै सुँकसुँक रुँदै थियो । ‘बेस्मारी कुटे होलान् । कस्तरी दुखेको होला’, सन्तेले मनमनै भन्यो । होमवर्क नगरेको दिन स्कुलमा गुरुले आफ्नो हातमा छडीले हिर्काएको सम्झ्यो । पुन्टेको पीडा आफ्नै जस्तै लाग्यो उसलाई ।
स्कुल बिदाको दिन सन्ते र पुन्टे सँगै खेल्छन् । तर पुन्टेलाई बाबाले स्कुल पठाउँदैनन् । बरु माछा मार्ने काममा पठाउँछन् । ऊ दिनभरि खोलामा माछा मार्छ । साँझ पसलमा बेचेर आएको पैसा बाबालाई दिन्छ ।
‘पुन्टेलाई स्कुल पठाइदिनुस् न काका’, एक दिन सन्तेले साहस गरेर भनेको थियो ।
‘बढी बोल्ने थुतुनो यही होइन,’ सन्तेको मुख समाउँदै काकाले भनेका थिए, ‘हाम्रो पेसा नै माछा मार्ने, बेच्ने र पैसा लिने हो । किन जाने पढ्न ? यस्ता कुरा फेरि गरिस् भने तेरो मुख नै च्यातिदिन्छु ।’ सन्तेको होस् उड्यो । ‘अहिलेको जमानामा सबैले पढ्नुपर्छ भन्ने पनि नबुझ्ने कस्ता मान्छे हौ काका तिमी ? कुरा बुझ्नु न’ भन्न मन थियो तर भन्नै सकेन । डरले थुरथुर काप्दै घरतिर दौडियो ।
त्यो दिन सम्झेर आज काकासँगको डर पुनः जाग्यो । पुन्टेलाई नकुट्नु भन्ने आँट गर्नै सकेन । ‘अब कसरी बचाउने पुन्टेलाई’ उसको अगाडि कुनै उपाय सुझेन । हतपत केही कुरा सम्झियो र प्रवीण सरको घरतिर दौडियो ।
‘नमस्ते सर’ सन्तेले हात जोड्यो । तर केही बोल्न सकेन ।
‘भन् केटा किन आइस् ? ’ प्रवीण सरले भन्नुभयो ।
‘काकाले पुन्टेलाई कुट्नुभएको छ,’ उसले आत्तिँदै भन्यो । यस्तो सुन्नेबित्तिकै प्रवीण सर सरासर पुन्टेको घरतिर हिँड्नुभयो । सन्ते पछिपछि लाग्यो ।
सन्तेलाई गुरुसँगै भित्र जान मन थियो । तर गएन । ‘के भन्ने हुन् काकाले ! प्रवीण सरलाई किन बोलाएर ल्याइस् भन्दै मलाई पिट्ने पो हुन् कि ? ’ यस्तै सोच्दै डराई–डराई बाहिरै उभिइरह्यो । भित्तामा टाँसिएर कुराकानी सुन्यो ।
‘नमस्कार है काका’, गुरुले काकालाई अभिवादन गर्नुभयो ।
‘नमस्कार मास्टरबाबु’, काकाले मलिनो स्वरमा अभिवादन फर्काए । गुरु आएको उनलाई राम्रो लागेन । तैपनि पाहुनाको स्वागत गर्नै पर्‍यो । सुकुल बिछ्याए र भने, ‘बस्नुस् मास्टरबाबु बस्नुस्, के कति कामले आउनुभो कुन्नि ? ’
‘खास कामले आएको त होइन काका । यही बाटो हिँड्दै थिएँ, यसो सञ्चो विसञ्चो सोधुँ भनेर पसेको नि । गुरुले केही थाहा नपाएझैं गर्नुभयो ।
‘अब काकाले के जवाफ देलान्’ सन्तेले लेघ्रो तान्यो । ‘गुरुसँग पनि झगडा पो गर्ने हुन् कि’ ऊ वेचैन भयो । काका एकछिन केही बोलेनन् । त्यही बेला अर्को कोठाबाट पुन्टे रोएको आवाज आयो।
‘के भयो पुन्टेलाई ? किन रुँदैछ । ढोका खोल्नुस् त ।’ गुरुले कडा स्वरमा भन्नुभयो ।
‘केही होइन मास्टर साहेब, पेट दुख्यो भनेर आराम गरी बसेको छ ।’ काकाले सीधै ढाँटे ।
‘मलाई सबै कुरा थाहा छ । किन पिट्नु भयो पुन्टेलाई ? ’ गुरुले ढोका खोल्दै भन्नुभयो । कोठाभित्र पुन्टे थरथर काप्दै बसेको थियो । गालामा नीलडाम देखियो ।
‘मेरो कुनै गल्ती छैन सर, मलाई बचाउनुस्’ अगाडि प्रवीण सरलाई देखेर पुन्टेले रुँदै भन्यो, ‘माछा बेचेको पैसा नदिए मार्छु भनेका छन् बाले ।’
प्रवीण सरले आफूलाई थाम्न सकेनन् । बरर आँसु चुहाए । पुन्टेलाई अँगालो हाले र सुस्तरी भने, ‘नरोऊ पुन्टे, तिम्रो म छु नि !’
गुरुले पुलुक्क काकालाई हेरे ।
‘मलाई माफ गर्नुस् मास्टरबाबू । रिसको झोकमा मबाट ठूलो गल्ती भयो’ काकाले हात जोडेर गुरुसँग माफी मागे ।
बाहिर बसेको सन्तेलाई साहस आयो । लुसुक्क भित्र पसेर पुन्टेको नजिकै उभियो । उसको आँसु पुछिदियो । साथीलाई देखेर पुन्टे पनि हिक्क–हिक्क गर्न थाल्यो ।
‘आज माछा बेचेको पैसा के गर्‍यौ त पुन्टे’ प्रवीण सरले माया दर्शाउँदै सोध्नुभयो ।
पुन्टे केही बोलेन । भर्‍याङमुनि देखायो । त्यहाँ नयाँ स्कुलको झोला, किताव, कापी र कलम लुकाएको रैछ । माछा बेचेको पैसाले किनेर ल्याएकोले बाबालाई देखाउन डराएछ ।
सबै सामान बटुल्दै गुरुले भन्नुभयो, ‘पुन्टेलाई स्कुल जाने रहर रैछ । भोलिदेखि स्कुल पठाउनुस् है काका ।’
‘जस्तै गल्ती गरे पनि बालबालिकालाई पिट्न पाइँदैन । अझ पढ्छु भन्नेलाई उल्टै पिट्दा त झन् पाप लाग्छ । बालक पिटेको थाहा पाए भने तपाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गर्छ,’ प्रवीण सरले चेतावनी दिनुभयो । भन्नुभयो, ‘सन्तेले खबर नगरेको भए आज के हुन्थ्यो, हुन्थ्यो । अहिले माछा मार्दै समय खेर फालेमा भोलि उसले के खान्छ ? अहिले तपाईं काम गर्नुस्, उसलाई पढ्न पठाउनुस् । पढेको मान्छेले राम्रो जागिर पाउँछ । अनि बुढेसकालमा तपाईंलाई राम्ररी पाल्छ ।’
‘गल्ती भयो सर । मैले बल्ल पढाइको महत्व बुझें । भोलिदेखि उसलाई सन्तेसँग स्कुल पठाउँछु । काम पनि लगाउँदिनँ’ काकाले कसम खाए । सन्ते र पुन्टे खुसी भए ।
आइतवार, माघ २८, २०७४ नानीबाबुसँग खिलराज रेग्मीका मनका कुरा
मानवअधिकार आयोगको नाममा अर्बौं गोलमाल 12037
प्रदेश पदाधिकारीको तलब : कसको कति ? 11412
दोस्रो जनआन्दोलनपछि मात्रै ९ हजार ५ सहिद 2401
गठबन्धन र सरकारका चुनौती 833
मालदिभ्सको राजनीतिक संकट 1100
लालबाबुको दोस्रो अवतार 2436
बालुवाटारबाट 'झुल्किए' नवराज सिलवाल 2892
ट्रयाक्टर दुर्घटनामा दुईको मृत्यु, नौ घाइते 154
कालो बोको ढालेर सरकारी निवासमा मुख्यमन्त्री (फोटो फिचर) 3601
चार लाख घुससहित शाखा अधिकृत पक्राउ 926
'दुई थोपा हाँसो' अभियानको तेश्रो शृंखला सम्पन्न 280
सीसी क्यामेरा प्रयोगबिहिन,बढ्यो सुरक्षा चुनौती 337
हुवावे नोभा टु आईमा ‘फेस अनलक’ र ‘एआर लेन्स’ 485
अन्योलमा डिजिटलाइजेसन 2731
कुलमान घिसिङ बने मोबाइलमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने नेपाली 16674